Vor Marseille - The Kasaan Times
Qala zokuhamba Ngaphambi kweMarseille
24. Julayi 2018
Ngaphambi kweMarseilles, abavakalisi beendaba ze-kasaan, i-2018
Marseille, iparele Umlambo waseFransi
Uninzi malunga neMarseille libukeka njengeparadesi emhlabeni. Nayi umdlalo odumile "I-Count of Monte-Christo"Ukusuka Alexandre Dumas
das Château d'If nje ukuphosa ilitye ukusuka kunxweme.
Ezi dolophu ezintle zikunxweme Cassis zizodwa kwiindawo zokwakha, zinika iindawo zokutyela ezinokuthi ziyaziwa ngaphaya kwemida yelizwe.
IFransi ibonakala iFransi ngakumbi, ifana kunye nokuhamba kwinqanawa ihamba ngosuku.
Izwe kunye nabantu banconywa kakhulu.
Kambomannen - enye imfihlakalo evela eNorway
Isibongozo phantsi kweSiqendu 17 GG sokupheliswa kweHartz IV
Inqaku langaphambiliI-Breitbart yeHetzer Bannon ifuna ukuphazamisa ukhetho lwaseYurophu 2019
Inqaku elilandelayoNceda iGrisi!